미국에서 영어 공부를 (버마어 WESLI에 대한 정보) | WESLI 미국에서 영어 공부를 (버마어 WESLI에 대한 정보) – WESLI
미국에서 영어 공부를 (버마어 WESLI에 대한 정보)
학교 소개 ကျောင်း သ မိုင်း အကျ ဉ်း
WESLI (위스콘신 영어 외국어 연구소) ကို Wisconsin ပြည်နယ်၏ မြို့တော် Madison တွင် ၁၉၈၁ခုနှစ်က တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်တွင် တက္ကသိုလ်တက်လိုသော ကျောင်းသားများ၊ မိမိ၏ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်လိုသူများ နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်အကိုင်များရရှိရန်အတွက် အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာလိုသူများအတွက် WESLI တွင် Level ၈ခုခွဲကာ သင်ကြားပေးနေပါသည်။
WESLI တွင် နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ခန့်မှ ကျောင်းသား ၁၈၀ခန့်တက်ရောက်လျှက်ရှိကြသည်။ WESLI တွင် တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသားတိုင်းအတွက် လေဆိပ်တွင် လာရောက်ကြိုပေးခြင်း၊ နေထိုင်ရန် ကူညီပေးခြင်း နှင့် တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ရန် ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးနေပါသည်။ WESLI ကို State of Wisconsin Educational Approval Board မှ တရားဝင်လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီး American Association of Intensive English Programs (AAIEP) ၏ အ သင်း0င်ြ ဖစ် သ ည့်CEA မှ တရား0င်အသိအ မှတ်ြ ပု ထား သော ကျောင်း တစ် ကျောင်းြ ဖစ် ကာြ ပည် နယ် ဥပေ ဒနှင့်အ ညီ အေ မ ရိ ကန် တွင် ကျောင်း တက် လိုေ သာ ကျောင်း သား များကို သာ0င်ခွ င့်ြ ပုေ သာ ကျောင်းဖြစ်သည်။အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက www.wesli.com တွင်0င်ရောက်ြ က ည့်ရှုနိုင် ပါ သည်.
လုံြ ခုံ မှု ရှိြ ခင်း.နှ စ်လို ဖွယ် ကောင်းြ ခင်း. လှ ပြ ခင်းနှ င့်ပျော် ရွှ င်စ ရာေ ကာင်းြ ခင်း
수업 & 일정: အ တန်းနှ င့်အချိန် စာ ရင်း များ
WESLI တွင် အ င်္ဂ လိပ် စာ ကို အေြ ခ ခံ အဆ င့်မှ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနိုင်သည့်အဆင့်ထိ (WESLI ၏ သင် ရိုး နမူနာ ကို စာမျ က်နှာ6တွင် လည်း ကောင်း.0က်ဆိုက် ပေါ် ရှိ "ယ ခုနှစ်တ က္က သိုလ် စာ သင်နှစ်စာ ရင်း(현재 세션 코스 목록)"တွင် လည်း ကောင်းြ က ည့်ရှုနိုင် ပါ သည်.) အတန်းတစ်တန်းလျှင် ပျှမ်းမျှ ကျောင်းသား၉ဦးသာ လက်ခံလေ့ရှိပြီး WESLI တွင်တက်ရောက်ရန် ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သည်။တက်ရမည့် စာသင်ကာလ တစ်ခုလျှင် နှစ်လကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး အချိန်ပြည့်ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ကျောင်းတက်ချိန် တစ်ပတ်လျှင် ၁၈နာရီမှ ၂၂နာရီ၊ အိမ်စာအတွက် တစ်ပတ်လျှင် ၁၀နာရီမှ ၁၅နာရီခန့် သင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ပညာသင်ကာလတစ်ခုပြီးလျှင် ဆက်လက်တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသားများသည် မိမိ တက်ရောက်ရမည့် သင်တန်းကာလ အတွက် ကြိုတင်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားရမည့်အချိန်နှင့် ပညာသင်စားရိတ်ကို ကျောင်းလျှောက်လွှာ (သို 4)0က်ဆိုက် ပေါ် တွင်ြ က ည့်ရှုနိုင်ပါ သည်.
교사 & STAFF: ဆရာ / ဆရာ မများနှ င့်0 န်ထမ်း များ
စာ သင် သက် ရ င့်သော သူများြ ဖစ်ြ ပီး WESLI တွင် 15နှ စ်ကျော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးသူများလည်းဖြစ်သည်။
အ င်္ဂ လိပ် စာ အထူးြ ပု သင်ြ ကား ရေး အဆ င့်8 ဆ င့်
(အ တန်း တစ် ချိန် လျှင်2 နာ ရီနှုန်းြ ဖ င့်တစ် ပတ် လျှင်2 ရက် မှ3ရက် အထိြ ကာြ မ င့်မည်ြ ဖစ် သည်.)
해외 조건부 입학 (OCA):ြ ပည် ပကျောင်း သားြ ခွင်း ချ က်0 င်ခွ င့်(အို စီေ အ)
OCA သည် တ က္က သိုလ် တက် ရောက် ရန် အ တွက် လို အပ် သော အ င်္ဂ လိပ် စာ အ ရည် အချ င်း မပြည့်မီသေးသည့်ကျောင်းသားများအတွက် 700 수준 학업 အ တန်း ကို အောင်ြ မင် သူများ သည် တ က္က သိုလ် ဒုတိယ ပညာ သင်နှစ်သို40 င်ခွ င့်ရ ရှိ မည်ြ ဖစ် သည်.
OCA ကို ဘယ် အချိန် မှာ အ သုံးြ ပု သ င့်ပါသလဲ ?
OCA ကို ဘယ် လို ရ ယူနိုင် မလဲ
OCA လျှောက် ထား ရန် အချ က်အ လက်ြ ပ ည့်စုံေ သာ(ပညာေ ရး. ငွေေြ ကး စ သည်) ကျောင်း သား များ အ တွက် WELSI မှ တက္ကသိုလ်ပညာရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များမှထံမှ အကူအညီ ရ ယူနိုင် မည်ြ ဖစ် သည်.
မိ မိနှင့် သ င့်တော်သော အေ မ ရိ ကန် တ က္က သိုလ် တစ် ခုကို ဘယ် လို ရှာေ ဖွေ လျှာက် ထား မလဲ
အချိန် ပိုင်း တ က္က သိုလ် သင် တန်း များ
အြ ခား အခမဲ့0န်ဆောင် မှုများ – ပျော် ပွဲရွှ င်ပွဲများ. အြ ပန် အ လှန် စကာြးေ ပာေ ဖ်ာများ. စ သည် ...
대화 파트너: အြ ပန် အ လှန် စကာြးေ ပာေ ဖ်ာများ
WESLI ရှိ 활동 코디네이터 မှ ဘာသာစကား ချ င်း လေ့ လာ ဖ လှယ် လိုေ သာ တ က္က သိုလ် ကျောင်း သား များြ ဖ င့်ချိတ် ဆက် ပေး ပါ မည်.
လေ ဆိပ် တွင် လာြ ကိုေ ပးြ ခင်း
နှစ်ပတ်ြ ကို တင်ြ ပီး မိ မိေ ရာက် မ ည့်အချိန်နှင့်အြ ခား ခရီး သွား အချ က်အ လက်များကို ပို4ပေး ပါ က 매디슨 လေ ဆိပ် သို4လာြ ကိုေ ပးြ ပီး နေ ထိုင် မ ည့်အေ ဆာင် သို4မ ဟုတ် ဒေ သ ခံများနှ င့်အ တူေ န မည် ဆိုပါ က နေ မ ည့်မိသားစု ထံသို4ပို4ပေး မည်ြ ဖစ် သည်.
WESLI တွင် ကွန် ပျူတာ ခန်း တစ် ခန်း.
အြ ခား : WESLI မှ0န်ထမ်း များ က 이민 အ တွက် အြ ကံ ဥာဏ် ပေးြ ခင်း.
အ 레크리에이션 및 문화 ပန်ြးေ ဖ စ ရာများနှ င့်ယဉ် ကျေး မှု
주택 - 안락한 & 저렴한 သက် တော င့်သက် သာ ရှိြ ပီး စား ရိတ် နည်း သော အိမ် ရာများ
WESLI ရှိ အေ ဆာင် သို4မ ဟုတ် 홈스테이 (ဒေ သ ခံ အိမ် တွင် နေ ထိုင်ြ ခင်း) ကို လက် ခံ မ ည့်အေ မ ရိ ကန် မိသားစု အိမ် အား WESLI ရှိ 주택 코디네이터 (အိမ် ယာ စီ မံေ ရး မှူး) မှ ရှာေ ဖွ စီ စဉ် ပေး မည်ြ ဖစ် သည်. 공유 하우징 (အိမ်တအိမ်တွင်ကျောင်းသားများစုပေါင်းနေထိုင်ခြင်း) အေြ ခ အေ နမျိုး တွင် အိမ် ယာ စီ မံေ ရး မှူး သည်နိုင် ငံေ ပါင်း စုံ မှ ကျောင်း သား များ အတူ တ ကွေ န ထိုင်နိုင် ရန် အ တတ်နိုင် ဆုံး စီ စဉ် ပေး မည်ြ ဖစ်ြ ပီး နေ ထိုင် စဉ် အ တွင်း တွင် လည်း လို အပ် သ မျှကို ကူ ညီေ ပး မည်ြ ဖစ် သည်. (ဒေ သ ခံ အိမ် တွင် နေ ထိုင်ြ ခင်း) နြေ ခင်း တို4အ တွက် ကုန် ကျ စား ရိတ် မှာ တူညီ သေ လာက် ရှိြ ပီး မိ မိေ ရွး ချ ယ်သောေ နရာ တွင်2လ အ နည်း ဆုံး နေ ထိုင် ရ မည်ြ ဖစ် သည်.
기숙사: အေ ဆာင်
미국 가정 홈스테이: အမေရိကန်မိသားစုဝင်များနှင့်အတူနေထိုင်ခြင်း
학생 (F-1) VISA: ကျောင်း သား ဗီဇာ (F-1):
သင် တန်း0င်ခွ င့်လျှောက် လွှာကို WESLI ၏0က်ဆိုက် (www.wesli.com)တွင်ြ ဖ ည့်စွက်ြ ပီး ပေး ပို4နိုင် ပါ သည်.
ပူး တွဲ ပါ သင် တန်း လျှောက် လွှာကို အီး မေး လ်(သို4မ ဟုတ်) ဖက် စ်ြ ဖ င့်လည်း ပေး ပို4နိုင် ပါ သည်.
လျှောက် လွှာေြ ကး ဒေါ် လာ 100 ကို 신용 카드 (비자 သို4မ ဟုတ် 마스터 ကဒ်) (သို4မ ဟုတ်) ငွေ လွှဲ(သို4မ ဟုတ်) အေ မ ရိ ကန် ရှိ ဘဏ် တွင် ငွေ စာ ရင်း ဖွ င့်ထား သူ၏ ချ က်လက် မှတ်ြ ဖ င့်ပေး ပို4နိုင် ပါ သည်.
ငွေေြ ကး ဆိုင် ရာ စာ ရွက် စာ တမ်း များကို ဖက် စ်(သို4မ ဟုတ်) အီး မေး လ်ြ ဖ င့်ပေး ပို4နိုင် ပါ သည်.
ကျောင်း တက် နေ စဉ် အ တွင်း အ သုံးြ ပု ရ မ ည့်ကျောင်း စာ ရိတ်နှင့်နေ ထိုင် စား သောက် စား ရိတ် များ အ တွက် လုံေ လာက် သော ငွေေြ ကး ပမာဏ ရှိေြ ကာင်း အေ ထာက် အ ထားြ ပနိုင် ရန် အောက် ပါ စာ ရွက် စာ တမ်း များ မှ တစ် ခုကို ပေး ပို4ပေး ရပါ မည်.
က. လျှောက် ထား သူ၏ ကိုယ် ပိုင် ဘဏ် စာ ရင်း မိ တ္တူ
ခ. လျှောက် ထား သူ၏ မိဘ (သို4မ ဟုတ်) ကျောင်း တက် ရန် အေ ထာက် အ ပံ့ ပေး မ ည့်သူ၏ ဘဏ် စာ ရင်း မိ တ္တူ (အေ မ ရိ ကန်နိုင် ငံ တွင် ကျောင်း တက် နေ စဉ် ထောက် ပံ့ မည် ဟု သေ ဘာ တူ ထား သော စာ ပါ0င်ရ မည်.)
ဂ. အစိုးရ (သို4မ ဟုတ်) အဖွဲ4အ စည်း မှ ပညာ သင်ြ ကား နေ စဉ် ကုန် ကျ စား ရိတ် များကို ကျ ခံ မ ည့်အေြ ကာင်း ရေး သား ထား သော စာ ရွက် စာ တမ်း.
I-20 ကို UPSြ ဖ င့်ရယူလိုပါက ကျောင်း လျှောက် လွှာေ ပါ် တွင် ဖော်ြ ပ ထား သော စာပို4ခ ကို တစ် ပါ တည်း ထ ည့်ပေး ရ မည်.
မှတ် ချ က်.